Umatshini wokwenza ucingo lwe-Helical-Yuyao Jera Line Fitting Co, Ltd.
Enye yeemveliso eziphambili zeJera fiber kukufakwa kwemigca yeHelical. Sivelisa iimveliso ngokwenkqubo yocingo lwentsimbi, ukugoba, ukujija, isanti kunye nogquma.
Kwi-helical yocingo olwenza iworkshop, sivelisa iimveliso ezilandelayo:
-I-insulator yenziwe ngaphambili ii-ties ezibandakanya amaqhina adibeneyo, amaqhina asecaleni, amaqhina e-spool, amaqhina aphezulu)
Ukuphela komntu oswelekileyo okubandakanya ukubambelela kwintambo ye-ADSS, i-strand wire guy grips, i-ACCC, i-ACSR guy
Ukubambelela -Suspension ezibandakanya ukubambelela ukunqunyanyiswa ngeentonga amor kunye ADSS zokumisa nezibophelelo helical
Sikwenza uphando kwaye siphuhlise iimveliso zeemveliso ezizenzekelayo yile teknoloji.
Izinto zokwenza izinto zokulinganisa umgca we-helical ziyintsimbi enje ngesinyithi esishushu sentsimbi, i-stainless steel, i-aluminium, i-aluminium yentsimbi yentsimbi kunye nobhedu. Sijonge yonke imathiriyeli ngokwe-standard standard ye-ISO 9001: 2015 kunye neJERA yangaphakathi yokuhlola.
Ngale teknoloji, umgca wejera uyakwazi ukwenza iimveliso ezintsha okanye ukwenza ngokwezifiso uluhlu lwemveliso yangoku ukuze ukhuphisane ngakumbi, kwaye ube nakho ukubonelela abathengi bethu ngezinikezelo ezifanelekileyo kunye nomgangatho ophezulu.
Injongo yethu kukubonelela ngesisombululo esipheleleyo kwintambo ephezulu yokumisa kunye nokumisa. Senza zonke iimveliso ezinxulumene noko kubaxhasi bethu kulwakhiwo lothungelwano lonxibelelwano kunye neenkqubo zokuhambisa amandla. Ukuba uneemfuno ezinxulumene neemveliso, zive ukhululekile uku-imeyile okanye usitsalele umnxeba.